အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သော ယုံကြည်ခံယူချက် | The Doctrine of the Remnant| Real Conversion
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ရက်၊
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ကောင်းကင်ဘုံခြေအရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌ အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်စေ တော်မမူလျှင် ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဂေါမောရမြို့နှင့် တူကြပြီ” (ဟေရှာယ ၁း၉)
ယနေ့ညတွင် တက္ကစက်ပြည်နယ် ဒါးလားစ်မြို့၌ရှိသော ပထမနှစ်ခြင်း အသင်းတော်၏ သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာဒဗလျူအေခရစ္စဝေလ်(၁၉၉၉-၂၀၀၂)၏ တရားဒေသနာခေါင်းစဉ်ကို ငှားရမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောတရားဟော ဆရာတို့က “ခံယူချက်” ဟူသော စကားလုံးကို မသုံးစွဲပါနှင့်။ “ခံယူချက်” ကို လူအများက လက်မခံကြဘူး” ဟူ၍ ပြောဆိုကြမည်ကို ငါသိထားပါသည်။ ၎င်းတရားဟောဆရာတို့အဖို့မူကား ခံယူချက်နှင့်ဓမ္မဗေဒသည် အရေးမပါဘူးဟူ၍ ခံယူထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းဆရာတို့က သမ္မာကျမ်းစာခံယူချက်ထက် လူသားအကြိုက် ကိုလိုက်၍ ဟောတတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုဆိုင်ရာအကြောင်း လေ့လာခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်း ဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း၊ အပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း၊ နတ်ဆိုးများအကြောင်း လေ့လာခြင်း၊ အသင်းတော်များအကြောင်းလေ့လာခြင်းနှင့် အခြားသောဓမ္မဗေဒဆိုင်ရာ လေ့လာခြင်းများအကြောင်း ငါတို့ မကြားကြရတော့ပေ။ ယနေ့ခေတ်တွင် များသောအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ဦးစားပေးတရားဒေသနာတော်ထက် လူကို ဦးစားပေးသော တရားဒေသနာသာ ငါတို့ ကြားရကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် “အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သော ယုံကြည်ခံယူချက်” ဟူသော ဒေါက်တာ ခရစ္စဝေလ်၏ တရားဒေသနာတော်ခေါင်းစဉ်ကို အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျော်ကြားသော တရားဟောဆရာတို့သည် ယုံကြည်ခံယူချက်တို့ကိုသာ ဟောကြား လေ့ရှိပါသည်။ဍ
ယနေ့ခေတ်တရားဟောဆရာအများတို့သည်, ကြည်ခံယူချက်နှင့် ဓမ္မဗေဒ ဆိုင်ရာ သမ္မာတရားအကြောင်း စဉ်းစားတွေးခေါ်မည့်အစား လူ၏လိုအပ်ချက်များ ကိုသာ ဦးစားပေးတွေးတတ်ကြသည်။ ခေါင်းဆောင်များအားလုံးသည် လူ၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးသော ခေတ်သစ်ဒေသနာခေါင်းစဉ်များဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ “သင့်ဘ၀ အသက်တာထဲက လုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ဝတ္တရား”၊ “မေတ္တာ၌တည်နေခြင်း” သာမာန် ဘ၀ကိုကုစားလော့” “သင်သည် အံ့ဖွယ်လက္ခဏာနှင့် ပြည်စုံသူဟု ဘုရားသခင် ထင်မှတ်သည်။” နုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ လုံခြုံမှုမရှိသော ကမ္ဘာကို “ချိန်ခွင်ညီ အသက်ရှင်ခြင်း” “ပျောက်ဆုံးသူအသက်ရှင်ခြင်း” “ပိုကောင်းသောဘ၀၌ သင်အသက် ရှင်ပါ” “ယခုတွင်သင်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပါ” “သင်မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ” “သင်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါ” ထိုအရာများသာမကဘဲ “လက်ထက်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းဖို့ အားပါးတရ ရယ်မောလိုက်စမ်းပါ”ဟူသောဒေသနာ ခေါင်းစဉ်လည်းရှိသေး၏။ ၎င်းဒေသနာတော်များက အဘယ်နည်းနှင့်မျှ အသုံးမဝင်ဘူးဟု ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ ၎င်းဒေသနာခေါင်းစဉ် များသည် သမ္မာကျမ်းစာခံယူချက်နှင့် ဓမ္မဗေဒအခြေခံသဘောတရားထက်၊ လူသား ဦးစားပေးတရားဒေသနာတော်သည် ယနေ့ခေတ်၌ ပို၍တွင်ကျယ်လာပါသည်။ တစ်ခါ တရံ ထိုဒေသနာတော်ခေါင်းစဉ်တို့သည် ငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းလှပါသည်ဍ ထိုအရာသည် အော်ရက်ပ်ဝင်းပရေနှင့် ရက်ဒါတိုင်ဂျစ်တို့၏ တရားဒေသနာနှင့် အလားတူပင်ဖြစ်သည်ဍ
ဒေါက်တာဒေးဝိဒ်အက်ယ်ဝေလ်၏ စာအုပ်ကို ငါဖတ်ကြားလေ့ရှိပါသည်။ ထိုဆရာသည် ကော်ဒန်ကောဝေလ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကျောင်း၏ ပါမေက္ခတစ်ဦး ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုဆရာသည် အသစ်သောဧဝံဂေလိကယ်သမားဖြစ်သော်လည်း ထိုဆရာ၏ ရေးသားထားသော အချို့သောအချက်အလက်များ စိတ်ဝင်းစားဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သူရေးသားထားသည်မှာ၊ “ဘာမှမရှိခြင်းနှင့် နုနယ်သော ကလေးဆန်ခြင်းဟူသော ပုံပြင်လေးသည် ယနေ့ဧဝံဂေလိကယ် အသင်းတော်တို့၏ တရားဟောပလ္လင်ထက်၌ ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုပြောဆိုကြသည်ကိုတွေ့ရ၏။ ငါတို့၌ ဓမ္မဗေဒနှင့်ပါတ်သက်၍ လက်ချဉ်းသက်သက်ဖြစ်နေခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေခြင်း၌ လက်ချည်းဗလာဖြစ်နေခြင်းအကြောင်း ပြင်းထန်စွာဟောကြား ခဲ့ကြသည်” (David F. Wells, Ph.D., No place for Truth: or Whatever Happened to Evangelical Theology?, Eerdmans, 1993, p. 292). ငါအနေနှင့် ထိုဆရာနှင့် သဘောထားတိုက်ဆိုင်ပါသည်ဍ
ဒေါက်တာဒဗလျူ.အေ. ခရစ္စဝေလ်သည် သမ္မကျမ်းစာခံယူချက်အတိုင်း ဟောကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆရာ၏ တရားဒေသနတော်အများသည် ဓမ္မဗေဒအခြေခံနှင့် အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖေါ်ပြခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအခြေခံသဘော တရားကိုသာ ဟောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာခရစ္စဝေလ်၏ “အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သော ယုံကြည်ခံယူချက်”နှင့် ပါတ်သက်၍ ငါအံ့အား မသင့်ပါ။ ၎င်းဒေသနာခေါင်းစဉ်သည် ထုံထိုင်းခြင်းမဖြစ်စေ၊ တောက်ပြောင်မှုကို ပေးသည်။ ဒေါက်တာခရစ္စဝေလ်အကြေားကြားဖူးသော လူတိုင်းက ထိုဆရာကို မီးကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော တရားဟောဆရာဟု ခေါ်တွင်ကြပါသည်ဍ ခရစ္စဝေလ်လည်း ဒေါက်တာ မာတင်လွိုင်ဂျုံးနှင့် သဘောထားကိုက်ညီသူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာလွိုင်ဂျုံး ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ တရားဟောခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်သို့နည်း၊ ပြင်းထန်စွာအဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ တွေးခေါ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာဓမ္မဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာခြင်းမည်၏။ တရားဟောခြင်း ဆိုသည်မှာ မီးဖြင့်စစ်ဆေးပြီး ကြွလာတော့မည့်သူအကြောင်းလေ့လာခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသို့ ဘက်မလိုက်ဘဲ အတည့်အလင်းဟောကြားသောသူတို့အဖို့ ပလ္လင်ပေါ်၌ ရှိနေခွင့်မရှိကြ။ ဘယ်တော့မှလည်း တရားဟောခွင့်မရရှိကြ (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Preaching and Preachers, Zondervan Publishing House, 1972, p. 97).
ငါလည်း ဒေါက်တာခရစ္စဝေလ်၏ “အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သော ယုံကြည်ခံယူချက်” ဟူသော တရားဒေသနာခေါင်းစဉ်တို့ကို ဆက်လက်၍ ဟောကြား ပါမည်။ ငါဆုတောင်းသည်မှာ ယနေ့ညတွင် ထာ၀ရဘုရားက “ဝိညာဉ် တော်မီးစေလွှတ်ပြီး မိတ်ဆွေများအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည် ပါသည်ဍ
ငါတို့၏ ဒေသနာတော်ခေါင်းစဉ်သည် “အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သော ယုံကြည်ခံယူချက်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
“ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌ အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်စေ တော်မမူလျှင် ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ ဖြစ်၍ ဂေါမရမြို့နှင့်တူကြပြီ (ဟေရှာ ၁း၉) ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌ အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်စေတော် မမူလျှင်” ဟေဗြဲဘာသာစကားအားဖြင့် “အကြွင်းအကျန်” ကို “ ဖြစ်ပြီး ၎င်းအဓိပ္ပါယ်မှာ “အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ရှေ့ခေတ်ပညာရှိတို့က ဟေဗြဲဘာသာမှ ဂရိဘာသာသို့ အနက်ပြန်သော ဟေလသဘာသာ အနက်ပြန်သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ဂရိစကား “ “ကို မျိုးစေ့ဟူ၍ အနက်ပြန်ထားပါသည်။ “ကောင်းကင်ဘုံခြေအရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်စေတော်မမူလျှင် ငါတို့သည် သောဒုံမြို့သို့ဖြစ်၍ ဂေါမရမြို့နှင့်တူကြပြီ။ အကြွင်းအကျန်နှင့် ပါတ်သက်သော ခံယူချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ၎င်းမှာမီးဖြင့် စစ်ဆေးပြီး သစ္စာရှိလျှက် ကျန်ရစ်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကိုယ်တော်နှင့် ဆုံတွေ့ကြမည့်သူတို့ကို ခေါ်သည်ဍ ထိုအရာကို အကြွင်းအကျန်ဟု ဆိုလိုသည်ဍထိုအရာသည် ယနေ့ ငါတို့၏ တရားဒေသနာတော်ပင်ဖြစ်သည်ဍ
“ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌ အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်စေတော်မမူလျှင် ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဂေါမရမြို့နှင့်တူကြပြီ”
ပရောဖက်ဟေရှာယသည် တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်သော သတင်းစကားကို ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသတင်းစကားထဲ၌ မျှေလင့်ခြင်းကိုလည်း ရေးသားခဲ့၏။ ဟေရှာယကျမ်းတော်မြတ်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား ကမ္ဘာမြေကြီးကို တရားစီရင်ပြီး ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ဟု ပြောထားပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ထိုလူစု၌ကျရောက်သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သစ္စာရှိသော အကြွင်းအကျန် လူနည်းစုကို အသက်ရှင်လျှက် ကျန်ရစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကျန်ရစ်သော အကြွင်းအကျန် လူနည်းစုအားဖြင့် ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်၌ ခိုင်ခံ့သောအုတ်မြစ် ဖြစ်လာကြမည်ဖြစ်သည်ဍ ထိုအရာသည် အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သော ခံယူချက် ပင်ဖြစ်သည်ဍ
“ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌ အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်စေ တော် မမူလျှင် ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဂေါမရမြို့နှင့်တူကြပြီ” (ဟေရှာယာ ၁း၉)။
၁။	ပထမ၊ အကြွင်းအကျန်ခံယူချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ ဟေရှာရကျမ်းတော်မြတ်၌ တွေ့ရပါသည်။
ဟေရှာယ အခန်းကြီး တစ်ဆယ့်တစ်ကို ငါတို့ဖတ်ကြည့်သော်၊
“ထာ၀ရဘုရားသည် ကြွင်းကျန်သောလူနည်းစုကို ဒုတိယအကြိမ် လက်တော်ကို ဆန့်၍ တဖန် ကယ်နုတ်တော်မူမည်” (ဟေရှာယ ၁၁း၁၁)။
၎င်းအခန်းကြီး၏ အခြားကျမ်းပိုဒ်ငယ်၌ ပြောကြားသည်မှာ၊
“ကြွင်းကျန်သောကိုယ်တော်၏လူတို့ သွားရာလမ်းကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ (ဟေရှာယ ၁၁း၁၆)။
ထို့နောက် အခန်းကြီးသုံးဆယ်ခုနှစ်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“သင်သည် ကြွင်းကျန်သောလူတို့အဖို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုပါဟု ပြောစေခြင်းငှါ” (ဟေရှာယ ၃၇း၄)။
ထို့နောက် နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ၎င်းအခန်းကြီး၌ ငါတို့ တွေ့ကြရမည် ဖြစ်သည်။
“ဘေးလွတ်၍ ကြွင်းကျန်သောç ကြွင်းကျန် သောသူတို့သည် ယေရုရှလင် မြို့ထဲက၎င်း” (ဟေရှာယ ၃၇း၃၁ç၃၂)။
“အိုယာကုပ်အမျိုးတို့ ငါ့စကားကို နားထောင်ကြလော့။ ကြွင်းကျန်သော ဣသရေလအမျိုးအပေါင်းတို့” (ဟေရှာယ ၄၆း၃)။
ကြွင်းကျန်သောခံယူချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ ရောမဩဝါဒစာ၌ တွေ့ရပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု မိန့်ကြားထားသည်မှာ၊
“ပရောဖက်ဟေရှာယသည်လည်း ဣသရေလလူစုကို ရည်မှတ်၍ ကြွေးကြော် သည်ကား ဣသရေလအစုတို့သည် သမုဒ္ဒရာ သဲလုံးနှင့်အမျှ များသော်လည်း ကြွင်းကျန်သောသူတို့သာလျှင် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်” (ရောမ ၉း၂၇)။
“ထိုသို့နှင့်အညီ ဟေရှာယသည် အထက်ကဆိုပြန်သည်ကား ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌ မျိုးစေ့ကိုကြဲစေတော်မမူလျှင် ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဂေါမရမြို့နှင့်တူကြပြီ” (ရောမ ၉း၂၉)။
ပရောဖက်ဟေရှာယသည် အပြစ်ကိုဖေါ်ပြသောသတင်းကောင်းကို စတင်ဟော ကြားခဲ့သည်။
“ဆိုးယုတ်သော၊ ဒုစရိုက်ဝန်ကိုထမ်းရွက်သောလူစု၊ မတရားသဖြင့်ပြုသော အနွယ်၊ ဖေါက်ပြန်သော သားသမီးပါတကား၊ ထာ၀ရဘုရားကို စွန့်ကြပြီ။ ဣသရေလအစု၏ သန့်ရှင်းသောဘုရားကို မရိုမသေပြု၍ပယ်ကြပြီ။ ကျောခိုင်း၍ ခွါသွားကြပြီး”။ (ဟေရှာယ ၁း၄)
ထို့နောက် ပရောဖက်ကြီးက မိမိတို့၏ အပြစ်အတွက် သန့်ရှင်းသော ထာ၀ရဘုရားသခင်က တရားစီရင်မည်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
“သင်တို့ပြည်သည် လူဆိတ်ညံလျှက်ရှိ၏။ သင်တို့မြို့ကိုမီးလောင်ပြီ။ သင်တို့မြေများကိုလည်း တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည် သင်တို့မျက်မှောက်၌ စားကြ၏။ ရန်သူဖျက်ပြီးသကဲ့သို့ လူဆိတ်ညံလျှက်ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၁း၇)။
နောက်ဆုံး၌ ပရောဖက်ဟေရှာယကလည်း သင်တို့တွင် ထာ၀ရဘုရားသခင် အတူမရှိခဲ့သော သင်တို့သည် ငိုကြွေးခြင်း ငြိမ်းချမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုအရာသည် ဟေရှာယကျမ်း၌ ဖေါ်ပြထားသော အကြွင်းအကျန် ခံယူချက်နှင့် ပါတ်သက်သောအရာဖြစ်သည်။
၂။	ဒုတိယ၊ အကြွင်းအကျန်ခံယူချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ သမ္မကျမ်းမြတ်တော်၌ သာ တွေ့ရသည်။
“ထာ၀ရဘုရားကလည်း ငါဖန်ဆင်းသောလူကို မြေကြီးမျက်နှာမှ ငါသုတ်သင် ပယ်ရှင်းမည်။ (ကမ္ဘာ ၆း၇)။
ထိုအရာသည် ကြီးမားသော တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“နောဧမူကား ထ၀ရဘုရားစိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်သတည်း” (ကမ္ဘာ ၆း၈)
ထိုအရာသည် ကြွင်းကျန်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်သော ခံယူချက်ဖြစ်သည်။ နောဧနှင့် မိသားစုသည် ဘုရားသခင်၏ ကြွင်းကျန်စေသော “အနည်းငယ်သော အကြွင်းအကျန်” ဖြစ်ပါသည်။ အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သောခံယူချက်ကို အာဗြဟံ၏ အသက်တာ၌ ငါတို့တွေ့ရပါသည်။ သူ့အား ခါလဒဲပြည်သားတို့နေသော ဥရမြို့မှထွက်စေပြီး ကမ္ဘာပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏ အကြွင်းအကျန်လူစု ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင် ကြွင်းကျန်စေသောသူ နောက်တစ်ဦးရှိခဲ့ပါသည်ဍ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကို ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၌ ငါတို့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အဲဂုတ္ထုပြည်ကျွန်ခံရာမှ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူတို့ကို ဟေရှာယအားဖြင့် ဦးဆောင်ခေါ်ထုတ်စေခဲ့ပါသည်။ ဂိဒေါင်နှင့်စစ်သည်သုံးရာဖြင့် မိဒျန်လူတို့ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်စေခဲ့သည်ကို ငါတို့ တွေ့ရပါသည်။ ဒါဝိတ်နှင့် အနည်းငယ်သောလူအားဖြင့် ရှင်ဘုရင်ရှောလုနှင့်စစ်သည်တို့ကို အနိုင်ယူစေခဲ့သည်ကို ငါတို့တွေ့ရပါသည်။ ရှမွေလနှင့်ပရောဖက်အားလုံးတို့က ရုပ်တုဆင်းတုကို ကိုးကွယ် သောရှင်ဘုရင်များနှင့် ၎င်းတို့၏စစ်သည်တို့ကို အောင်မြင်စွာဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ သည်ကို ငါတို့တွေ့ရပါသည်။ ယေရှုနှင့်အနည်းငယ်မျှသော တပည့်တော်တို့က ရောမအင်ပါယာဧကရာဇ်မင်းထံသို့ အောင်မြင်စွာဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းပို့ဆောင် နိုင်ခဲ့ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်သော လူစုတို့ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလထဲသို့ ရောက်ရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ နုတ်ကတ်တော်၌ လာသည့်အတိုင်း ဣသရေလူလူတို့ကို စာတန်သည် အမျက်ဒေါသထွက်လျှက် “နဂါးသည် မိန်းမကို အငြိုးထား၏ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍ ယေရှု၏ သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို စွဲလန်းသောသူဖြစ်သော ထိုမိန်းမ၌ ကြွင်းကျန်သော မျိုးနွယ်စုကို စစ်တိုက်ခြင်းငှါသွား၏” (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၇)။ ထိုအရာသည် အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက် သော ခံယူချက်ဖြစ်သည်။ အနည်ငယ်သော ဘုရားသခင်၏ လူစုတို့သည် အပြစ်အမှောင် ကမ္ဘာ၌ ကြွင်းကျန်ကြမည်ဖြစ်သည်။
၃။	တတိယ၊ ယနေ့တွင် ကြွင်းကျန်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အမှန်ဖြစ်လာလေ ပြီဖြစ်သည်။
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်သောသူတို့ လွှတ်မြောက်ခဲ့သနည်းဍ နောဧ မိသားစုအားလုံး ရှစ်ဦးသာ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအရာသည် အကြွင်းအကျန် ခံယူချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ထာ၀ရအရှင်ဘုရားသခင်က အာဗြဟံ တစ်ဦးတည်းကိုသာ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအရာသည်လည်း အကြွင်းအကျန်နှင့် ပါတ်သက်သော ခံယူချက်ပင်ဖြစ်သည်ဍ ဣသရေလအထဲတို့၌လည်း မှားယွင်းသောမိစ္ဆာဝါဒီ၇၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရားက ဧလိအား “ထိုသို့လျှောက်သောအခါ အဘယ်သို့ ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသနည်း ဟူမူကား၊ ဗာလရှေ့၌ ဒူးမထောက်သော လူခုနှစ် ထောင်တို့ကို ငါ့အဖို့ ငါကြွင်းကျန်စေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏” (ရောမ ၁၁း၄)။ ထိုအရာသည် အကြွင်းအကျန်နှင့်ပါတ်သက်သော ခံယူချက်ပင်ဖြစ်သည်ဍ ယေရှုဘုရားကလည်း အနည်းငယ်မျှသာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်က၊
“ကျဉ်းသောတံခါးကိုဝင်ကြလော့၊ ပျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းနှင့် တံခါး သည် ကျယ်ဝန်းသည်ဖြစ်၍ ဝင်သောသူတို့သည် များကြ၏။ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်သောလမ်းနှင့်တံခါးသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍ တွေ့ဝင်သော သုတို့သည် နည်းကြ၏“ (မဿဲ ၇း၁၃-၁၄)။
“တွေ့ဝင်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏”ဟူသည်ကား ကြွင်းကျန်သော ခံယူချက် ပင်ဖြစ်သည်။ဍ
ယနေ့ည သန်းပေါင်းများစွာရှိသော လေ့အိန်ဂျလစ်မြို့ထဲက ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ဤနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၌ အနည်းငယ် ကြွင်းကျန်သောသူဖြစ်လိုပါသလား၊ သင်သည်လည်း ယေရှုဘုရားသခင်ကိုတွေ့၍ ကယ်တင်ခြင်းခံရသူဖြစ်လိုပါသလား၊ သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ “တွေ့ဝင်သော သူတို့သည် နည်းကြ၏” (မဿဲ ၇း၁၄)။ အများတို့သည် “ထာ၀ရပြစ်ဒါဏ်ကို ခံရာသို့ သွားကြရလတံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၂၅း၄၆)။ သင်သည် အသင်းတော်သို့လာ ရောက်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းကိုခံယူလျှက် ဘုရားသခင်၌ ကြွင်းကျန်သောသူ ဖြစ်လိုပါသလား ၊
တစ်စုံတစ်ဦးက စပါဂျန်ကို ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “သင် ဘာဘဲလုပ်လုပ်၊ သင်ဘယ်လိုဘဲတရားဟောဟော၊ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားပါစေ။ ယေရှုသခင်၏ မစမှုမရှိဘဲ အချို့သောသူတို့ ယုံကြည်လာမည်မဟုတ်ဟု သင်ယုံကြည်ပါလား၊ “တကယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော မေးခွန်းပါလား၊” စပါဂျန်က ထိုသူအား “အဲဒီလိုမဟုတ်ရဘူး၊ အချို့သောသူတို့သည် တရားဒေသနာကို နားထောင်ကြတယ်။ အချို့သောသူတို့သည် နှလုံးသားတံခါးကို ဖွင့်ပြီး၊ အချို့သောသူတို့သည် ကယ်တင် ခြင်းကို လက်ခံကြသည်ကို ငါယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၌ ကြွင်းကျန်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်! ထိုအရာတို့သည် ကြွင်းကျန်သောသူတို့အား ဘုရား သခင်ပေးသနားတော်မူသော သက်သာရာပင်ဖြစ်သည်။ ဤကမ္ဘာလောက၌ ဘုရားသခင် လက်မခံဘဲငြင်းဆန်သောသူတို့လည်း ရှိမည်။ လက်ခံယုံကြည်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော အချို့သူတို့ လည်းရှိသည်ကို ငါတို့တွေ့နေရပါသည်။ အချို့သော သူတို့သည် ဇာတိအပြစ်သဘောမှရုန်းထွက်ပြီး ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်သူလည်း ရှိပါသည်။ အချို့သော သူတို့သည် သခင့်အသွေးတော်၌ မိမိတို့၏အပြစ်ကိုဆေးကြောပြီး သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရှိသောသူတို့လည်း ရှိကြပါသည်။ tချို့သောသူတို့ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြပါမည်။ သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၌ ကြွင်းကျန်သော လူစုဖြစ်လိုပါလား ၎င်းသည် ကြီးမားသောအမှုဖြစ်၏။ အချို့သောသူတို့ကား၊ မိမိတို့ အပြစ်ကို စွန့်ပယ်ပြီး ဘုရားသခင်အဖို့ ကြွင်းကျန်သောလူစု ဖြစ်လိုပါသလား? ၎င်းသည် ကြီးမားသော အမှုဖြစ်၏။ အချို့တို့သည်ကား မိမိတို့အပြစ်ကို စွန့်ပယ်ပြီး ဘုရားသခင်အဖို့ ကြွင်းကျန်သော ယေရှု၏သိုးစုတွေ ဖြစ်ကြသည်! ၎င်းသည် အံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်၏၊ ကောင်းကင်ဘံခရီးသို့ နှင်သူဖြစ်သည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“သိုးစုငယ်၊ သင်တို့သည် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့အဘသည် သင်တို့အား နိုင်ငံကို ပေးငြင်းငှါအလိုတော်ရှိ၏။ (လုကာ၁၂း၃၂)
ယနေ့ညတွင်ပင် သင်အားရိုးရှင်းသော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင် ချဉ်းကပ်စေလိုပါသည်။ ကြွင်းကျန်သော သိုးစုငယ်ဖြစ်စေလိုပါသည်! ယနေ့ညပင်ယေရှု ကို ကိုးစားယုံကြည်လိုက်ပါ။ ယနေ့ညပင်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းခံယူလိုက်ပါ!
ပေါလ်ရ်ဒါသီကုံးရေးသားသော ဓမ္မသီချင်းကို မစတာဂရိဖက်စ်က ပြန်လည်သီ ဆိုပေးပါသည်။ “ယုံကြည်ပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းတေးသီချင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ ယနေ့ညသင့်အား ငါတောင်းဆိုပါသည်။ ယုံကြည်ပါ၊ ယုံကြည်ပါယေရှုသခင်ကိုသာ ယုံကြည်ပါ! ဓမ္မသီချင်းကို မစတာဂရိဖက်စ်သီဆိုနေစဉ်၊ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုနှင့် ပါတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးလိုသောသူများအနောက်ဘက်၌ ရှိသောဆွေးနွေးခန်းသို့ကြွလှမ်းခဲ့ကြပါ။ အကယ်၍သင်သည် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တစ် ဦး မဖြစ်သေးပါက၊ ထိုဆွေးနွေးခန်းသို့သွားရောက်စေလိုပါသည်။ ဒေါက်တာကေကန်မှ သင်တို့အဖို့ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကျမ်းစာဆွေးနွေးပေးပါလိမ့်မည်။ မစတာဂရိဖက်စ်ဆို နေပြီးထိုအခန်းထဲသို့သွားကြပါ။
ယုံကြည်ခြင်းသာ၊ ယုံကြည်ခြင်းသာ အရာရာ၌ ယုံကြည်ခြင်းသာ
သင့်နှလုံးတံခါး ကိုယ်တော်သည် လုံခြုံစေပြီ
(၁၈၇၈-၁၉၃၈ ခုနှစ် ပေါလ်ရက်ဒါသီကုံးရေးသားသော “ယုံကြည်ပါကျူး”
သင်သည် ဒေါက်တာ HYMERS ကို စာရေးသားပေးပို့လျှင် မည်သည့်နိုင်ငံကနေ ရေး သားပေးပို့သည်ကို ပြောပြရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် သင့်အား အဖြေပေးနိုင်မည်မဟုတ် ပါ။ ဤတရားဒေသနာက သင့်အား ကောင်းကြီးပေးလျှင် ဒေါက်တာ Hymers ထံ အီးလ်မေးလ်ပေးပို့ပြီး ပြောပြပါ။ သို့သော် သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံကို ထည့်သွင်းရေး သားဖို့ မမေ့ပါနှင့်။ ဒေါက်တာ Hymers ၏ အီးလ်မေးလ်လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net (ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။ ) ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Hymers အား မည်သည့်ဘာသာဖြင့်မဆို စာရေးသားနိုင်သည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ် ဖြင့်ရေးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းသည်။ စာတိုက်ဖြင့် ရေးသားပေးပို့လိုလျှင် သူ၏လိပ်စာမှာ စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် ၁၅၃၀၈၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လ်၊ စီအေ၊ ၉၀၀၁၅ ဖြစ်သည်။ ဖုန်းဆက်ပြီး စကားပြောလိုလျှင် (၈၁၈) ၃၅၂-၀၄၅၂ ဖြစ်သည်။
အပါတ်တိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ "တရားဒေသနာစာမူ"ကိုနှိပ်ပါ။
ဤတရားဒေသနာစာမူများသည် မူပိုင်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Dr. Hymers ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲ စာအားဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒေါက်တာ Dr. Hymers ၏ ဗီဒီယိုတရားဟောချက်
များကိုမူ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
“ကောင်းကင်ဘုံခြေအရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ငါတို့၌ အနည်းငယ်မျှ ကြွင်းကျန်စေတော်မမူလျှင် ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဂေါမောရမြို့နှင့် တူကြပြီ” (ဟေရှာယ ၁:၉)
၁။	ပထမ၊ အကြွင်းအကျန်ခံယူချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ ဟေရှာရကျမ်းတော်မြတ်၌ တွေ့ရပါ သည်။ (ဟေရှာယ ၁၁:၁၁၊ ၁၆; ၃၇:၄၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၄၆:၃၊ ရောမ ၉:၂၇၊ ၂၉၊ ဟေရှာယ ၁:၄၊ ၇၊
၂။	ဒုတိယ၊ အကြွင်းအကျန်ခံယူချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ သမ္မကျမ်းမြတ်တော်၌ သာ တွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆:၇၊ ၈၊ ဗျာဒိတ် ၁၂:၁၇၊
၃။	တတိယ၊ ယနေ့တွင် ကြွင်းကျန်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အမှန်ဖြစ်လာလေ ပြီဖြစ်သည်။ ရောမ ၁၁:၄၊ မဿဲ ၇:၁၃၊ ၁၄၊ ၂၅:၄၆၊ လုကာ ၁၂:၃၂။